KASHIFAAD: Maxaa ka jira in Sambalooshe uu Xilka ku waayay Eedeyntii uu u jeediyay USA & Uk? – Kismaayo24 News Agency
KASHIFAAD: Maxaa ka jira in Sambalooshe uu Xilka ku waayay Eedeyntii uu u jeediyay USA & Uk?
by admin 30th October 2017 055
Sawirka Maanta Madaxweyne Ku Xigeenkii Hore Ee Galmudug Oo Wax Sajuud U Eg U Sameeyay Safiirka Ingiriiska.
Taliyaha Ciidanka Nabad Sugida Ee Cusub Xog Cusub.
Akhriso: Jadwalka doorashada madaxweynaha galmudug oo dhameystiran goormee ayeysa dhaceysa doorashada?
Wiil uu dhalay Abuu mansuur iyo Taliyihii ciidamada oo lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Abal
Xukuumada Somaliya oo meel marisey Sharci muhiim u ah Bulshada..
admin 19th April 2019